जो लुइस बनाउने टोनी गैलेन्टो | ब्राउन बम्बर | दुई टोन टोनी ग्यालेन्टो
ब्राउन बम्बर र दुई टोन टोनी ग्यालेन्टो
जो लुइस बनाउ टोनी ग्यालेन्टो २//28/।।
जो लुइस बनाम टोनी गैलेन्टो को लागी जून २ 28, १ 1939 XNUMX the मा आयोजित गरिएको थियो हेवीवेट च्याम्पियनशिप संसारको। यस समयमा, लुइसलाई ग्यालेन्टो रोक्न भारी (to देखि १) इष्ट थियो।
ग्यालेन्टो बक्सिंग समस्याहरू बाट प्रभावित भएनन्। एक पूर्व लडाई अन्तर्वार्ता मा, Galento तल लडाई मा आफ्नो दृष्टिकोण संक्षेप:
रिपोर्टर: "टोनी, तपाईलाई के संभावना छ जो लुइस विरुद्ध हो?"
Galento: "जो को?"
रिपोर्टर: "जो लुइस।"
ग्यालेन्टो: “म कहिले पनि द बमलाई लुकाउँदिन।
टोनी "दुई टन" Galento बारे
(जो लुइस बनाउ टोनी ग्यालेन्टो)
डोमिनिको एन्टोनियो गैलेन्टो एक अमेरिकी हेवीवेट बक्सर थिए। उनको प्रबन्धकलाई उनको झगडामा झन्डै ढिलो भएको कारणको लागि "दुई टोन" उपनाम दिईयो: "म यहाँ आइपुग्न दुई टन बरफ थियो"। गालेन्टो खेलकुदको इतिहासमा सब भन्दा र colorful्गीन लडाकुहरू मध्ये एक थिए। उनले अक्टोपस कुश्ती गरे, र उनको झगडाको लागि प्रचार स्टन्टको रूपमा कang्गारू बक्स गरे। उनले स्टेज आकर्षणको रुपमा 550० एलबी भालु पनि बक्स गरे।
ग्यालेन्टो एक "कुनै होल्ड गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको" झगडाकर्ता थियो, एक दुष्ट बाँयाको साथ हुक, जसले रिंग नियमहरू वा खेलकुद जस्ता त्यस्ता उत्कृष्टताहरूलाई कहिल्यै अनुमति दिँदैन, अन्य लडाकूलाई नकट्याउन उसको गोलमा हस्तक्षेप गर्दछ। बक्सरको रूपमा आफ्नो प्राइम बर्षको दौडान, ग्यालेन्टोले "द नट क्लब" नाम गरेको एक बारको स्वामित्व र संचालन गर्‍यो सुन्तला, नयाँ जर्सी। बिहान २:०० बजे पट्टी बन्द गरेपछि उनी आफ्नो रोडवर्क (ट्रेनिंग) गर्न ख्यातिप्राप्त थिए किन उनले रातमा किन प्रशिक्षण दिएको भनेर सोधेपछि ग्यालेन्टोले जवाफ दिए, "क्युज म रातमा झगडा गर्छु।" ग्यालेन्टो प्रोत्साहित गर्न नुहाउनबाट टाढा बस्न पनि परिचित थियो शरीरको गन्ध आफ्नो विपक्षी विचलित गर्न एक रणनीति मा। अधिकतम बेयर "उसले सडेको ट्युनाको गन्ध आयो र पुरानो मदिराको एक टब पसिना भइरहेको छ"।
Ale'5 (१9 सेमी) अग्लो दाबी गर्ने ग्यालेन्टो आफ्नो खेलको लागि २ matches177 एलबी (१०235 केजी) तौल गर्न मनपराउँथे। उनले जुनसुकै खानेकुरा खाएर फिटनेसको स्तर हासिल गरे। ग्यालेन्टोको लागि विशिष्ट खानामा छ वटा कुखुराहरू, स्प्यागेटीको एक छेउ, सबै आधा गैलन रातो वाइन, वा बियर, वा दुबै एकै ठाउँमा राखिएको थियो। जब उहाँ प्रशिक्षण शिविरमा जानुहुन्छ, उसले आफ्नो आहारलाई परिमार्जन गर्ने प्रशिक्षकको प्रयास विफल बनायो, र आफ्ना थप साथीहरूलाई खाना पकाएर उनीहरूसँगै आतंकित पार्छ।
ऊ बियरमा प्रशिक्षण दिन प्रतिष्ठित थियो र कथित a२ खायो तातो कुकुरहरु हेवीवेट आर्थर DeKuh सामना गर्नु अघि एक शर्त मा। ग्यालेन्टो लडाई भन्दा पहिले यति फुलेको थियो कि उनको सोंचे को कम्मर लाइन टुक्रा को लागी उसलाई मा फिट गर्न को लागी। ग्यालेन्टोले दाबी गरे कि उनी ती सबै तातो कुकुरहरूलाई खाने खानेकुराको असरबाट अल्छी थिए र उनी तीन फेरी सर्न सक्दैनन्। जे होस्, ग्यालेन्टोले चौथो राउन्डमा one'6 ″ (१3२ सेमी) डेकुहलाई एक पंच, बायाँ हुकको साथ आउट गरे।
जुन २ 28, १ 1939 XNUMX। मा, ग्यालेन्टो यसका लागि लडे हेवीवेट च्याम्पियनशिप बिरूद्ध संसारको जो लुइस। यस समयमा, लुइसलाई ग्यालेन्टो रोक्न भारी (to देखि १) इष्ट थियो। ग्यालेन्टो प्रभावित भएन। एक पूर्व लडाई अन्तर्वार्ता मा, Galento तल लडाई मा आफ्नो दृष्टिकोण संक्षेप:
ग्यालेन्टो: "म दा बमलाई कहिले पनि लुकाउँदिन।"
उनले भविष्यवाणी गरे कि उनी “मोइडा दा बम” हुनेछन्, र उनी बम हुन् भनेर व्यक्तिगत रूपमा बताउन लुईलाई दिनहुँ फोन गर्थे र ग्यालेन्टोले उनलाई “मोइडा” बनाए, जुन ट्युबम्पम्पि earlyको यस र colorful्गीन संस्करण, ग्यालेन्टोको स्तर हो जस्तो देखिन्छ। प्रस्तुतिको तरीका (पत्रिका हेर्नुहोस्, मार्च १,, १ 14 1939;; भोल्यूम ,, न।))। लुइसले पछि भने "उनले मलाई सबै कुरा भने।" यद्यपि एक भव्य आत्म-प्रमोटर भनेर चिनिन्छ, टोनी "काका" को महत्वपूर्ण सहयोग थियो माइक याकूब Ballyhoo मार्फत लडाई बेच्न, एक्लै। याकूबले अक्सर फोटो अप्स र नयाँ कथाहरूको लागि बियरको बोतलहरू, स्टिनहरू र केगहरू सहित ग्यालेन्टोलाई पोज गर्दछ। एउटा खुल्लमखुल्ला जोकर गर्ने शट, टोनीले दुधको बोतलबाट पिइरहेका थिए, याकूबले यसलाई समात्न प्रयास गरे। धेरै पहिले जर्ज फोरमैन चीजबर्गर खाने दावेदारको रूपमा, टोनी ग्यालेन्टोले बियरमा प्रशिक्षण गर्ने एक चुनौतीको रूपमा प्रशंसकको कल्पनालाई समात्यो। यो लगभग आवश्यक देखिन्थ्यो कि, तिनी गम्भीर र लुईको युद्धको लागि राम्रोसँग तयार रहेको देखाउन, ग्यालेन्टोले भने कि उनले दुई दिनसम्म मद्यपान गरेन।
दुई जना लडे याँकी स्टेडियम in न्यू योर्क शहर। छोटो, बाल्ड ग्यालेन्टोले भीड र उसको विपक्षीलाई चकित पारे र पहिलो राउन्डमा शक्तिशाली बाँया हुकको साथ लुइसलाई चोट पुर्‍यायो। दोस्रो राउन्डमा लुइसले ग्यालेन्टोलाई कुटिल संयोजनको साथ हिर्काउन थाले, ग्यालेन्टोको मुखमा काटेर एक चुनौतीको बायाँ हुकले चुनौती दिए जसले ग्यालेन्टोलाई उसको खुट्टाबाट उचालेको थियो। यो पहिलो पटक थियो जब गलेन्टो कहिल्यै आफ्नो पेशागत क्यारियरमा गिर्दै थिए। तेस्रो राउन्डमा, लुइसले फेरि गालेन्टोलाई संयोजनमा भेटिरहेका थिए जब गालेन्टोले उनलाई जंगली बायाँ हुक समात्यो; यस पटक लुई तल गए। लुइस, तथापि, छिटो उठ्यो, तर फेरी बाँकी को लागी कुनै अवसर लिएन। चौथो राउन्ड ग्यालेन्टोको लागि क्रूर थियो, जससँग कुनै प्रतिरक्षा थिएन र लुइसको आक्रमणको लागि खुला थियो। लुइसले उनलाई हत्यारा संयोजनहरू मारे जसले रेफरीलाई अन्तमा बाउट रोक्न बाध्य तुल्यायो।
लडाई पछि, Galento inconsolable थियो। ह्वाइट बिम्स्टीन, अभिनय गर्ने व्यक्ति: "... ऊ त्यहाँ बसिरहेको छ उसको आँखा, नाक र गालाबाट रगत बगिरहेको। उसले मलाई काट्न छोड्दैन। उसले मलाई उसका ग्लोभहरू बाहिर निकाल्न दिनेछैन, हरेक चोटि मैले उसलाई केहि गर्ने कोसिस गर्दा मलाई धकेल्छ, र धनुहरू, 'तपाईंहरूले मलाई आफ्नै लडाई लड्न दिनुहुने छैन। मैले त्यो चिसो ठोक्छु। '”ग्यालेन्टोले जीवनभर तर्क गरे कि उनका प्रशिक्षकहरूले उनीहरुलाई शैली बदल्न र सफासँग लड्न दृढ विश्वास दिलाए; उनले अफसोस गरे कि उनले "उनको" लडाई र लुइस लुक्न लडेन। लुइसको लडाईको एक बर्ष पछि, बिम्स्टाइनले फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे, बबलाई जोड दिएर र टोलीले दुई दुई राउन्डमा अपनाएको टोनीले काम गरिरहेको थियो, दोस्रो फ्रेममा लुइसको पछाडि प्रमाणको रूपमा। बिम्स्टिनले भने, "तब (ग्यालेन्टो) उनी जोन एल सुलिवान हो भन्ने सोचे र सीधै स्लगमा आए," र लुइससँग तिमीले त्यसो गर्न सक्दैनौ। "
जो लुइस र टोनी ग्यालेन्टो एकसाथ उभिए जनवरी २,, १ 29 1976 मा द वे इट थियो, स्पोर्ट्स नोस्टल्जिया प्रोग्राम (पीबीएस)। एपिसोड एकदमै जीवन्त थियो, किनकि ग्यालेन्टोको प्रत्यक्ष-सीधा र रंगीन शैलीको सगाईको लागि मात्र यो विशेष थियो। अनुभवी लडाई कमेन्टेर द्वारा प्रश्न छोड्दा लुइसले आफूलाई एक आश्चर्यजनक पक्ष देखायो डन डन्फी, कुनै पनि बिरामी भावना बनामको बारेमा। अधिकतम श्मेलिंग (लुइसले भने कि उनी र श्मेलि truly वास्तवमै विरोधीहरू थिएनन् बरु वास्तवमै "असल साथीहरू" थिए), त्यसपछि उनले ग्यालेन्टोलाई औंल्याए र भने, "तर त्यो सानो साथी ... उसले मलाई बौलाहा बनायो। हाम्रो लडाईको लागि प्रशिक्षण दिईरहँदा ती सबैले मेरो बारेमा भनेको कुरा हो। ऊ मलाई पागल भयो, ठिकै छ। ” लुइसले यो भनाइलाई जोड दिँदै लडाईँ गरे कि उसको क्रोध यस्तो थियो कि उनले ग्यालेन्टोलाई “बोक्ने” निर्णय गरे, अर्थात् “ती अश्लील चीजहरूका लागि उहाँलाई सजाय दिन” लडाईलाई तान्न खोजे। यद्यपि पछाडि लुइसिएपछि लुइसले आफ्नो सोच परिवर्तन गरे: “[ग्यालेन्टो] एकदमै कठोर हिट। त्यसैले मैले उहाँलाई सकेसम्म चाँडो बाहिर फालिदिए। ”
ग्यालेन्टोका अन्य दुई प्रसिद्ध झगडाहरू पूर्व च्याम्पियनसँग थिए अधिकतम बायर, र दावेदार लू नोवा। नोभाको लडाई अहिलेसम्म लडेको सबैभन्दा dirtiest र रक्तपातपूर्ण झगडा हो। नोभा पाँच पटक तल झारियो। ग्यालेन्टो घुँडा टेकेर बट्टिलो भयो, बेल्ट मुनि दियो र कम्तिमा दुई नकडाउनमा ग्यालेन्टो नोभेमा उसको २ 230० एलबी (१०104 किलोग्राम) ले पहिले घुँडा टेके। रेफ्री जर्ज ब्लेक अन्ततः १hem औं राउन्डको २::2 मा माहेम रोके।
ग्यालेन्टोको म्याक्स बायरसँगको लडाई समाप्त भयो जब रेफ्रीले आठौं राउन्डमा बाउट रोके। बायर लडाईको दिनमा, ग्यालेन्टोले पहिले आफ्नो बारमा रोक्न निर्णय गरे। त्यहाँ उसले स्प्यागेटीको ठूलो भाँडो राखेको थियो, मासुको बलले बियरको आधा केसले नुहाइन्थ्यो। खाना खाइसकेपछि गालेन्टो आफ्नो भाइसँग झगडामा फसे। यो विवाद समाप्त भयो जब उनका भाइले गीलेन्टोको अनुहारमा बियरको गिलास फ्याँकिदिए, उनको ओठमा कठोर रूपमा काट्यो। ग्यालेन्टोलाई झगडा हुनु भन्दा केही घण्टा पहिले काट्नुपर्‍यो। बायरले पहिलो राउन्डमा कट पुन: खोल्यो, ग्यालेन्टोलाई बाँकी बाँकीको लागि रगत निल्न बाध्य पार्यो। झगडा पछि, ग्यालेन्टोले क्षतिको लागि उसको “टाउको वरिपरि कम्मर कसेर” उसलाई दोष दिन नसक्ने आरोप लगायो। उनको रेकर्ड kn०-२80- was थियो 265नकआउट्सको साथ।
कम ज्ञात, राम्रो कारणको साथ, ग्यालेन्टोको लडाई हो एर्नी स्काफ १ 1932 .२ (नेवार्क) मा। Schaaf समय मा नम्बर3द्वारा क्रम मा थियो रिङ म्यागजिन, र लडाई तब चैम्पियन संग एक शीर्षक लडाई को लागी एक कदम हो ज्याक शार्की। लडाई पहिलो देखि jinxed देखिन्छ, तथापि, अन्तमा हुनुभन्दा अघि तीन पटक वर्षा भयो। यो अनुसूचित १०-राउन्ड दूरीमा गयो, तर यो दृश्य प्रसंग थियो, क्रूर ईन्फाइटि withको साथ झगडा र धेरै अवैध प्रहारहरू समावेश गर्दै। दुई-टोन टोनीले बारम्बार स्काफलाई दायाँ हातको चपहरू ('खरगोश पंचहरू') द्वारा घाँटी पछाडि प्रहार गरे। चाँडै निको हुन सक्ने स्काफ अन्तमा बलियो थियो र निर्णयमा विजयी भयो, तर उसले लामो घण्टासम्म ड्रेसिंग कोठाको टेबुल छोडेन, जबकि ग्यालेन्टोले मात्र आफ्नो पर्स जम्मा गरी घर गयो। स्काफको क्यारियर तलतिर झर्दै, म्याक्स बायरबाट एक कठोर प्रहारबाट टुating्गियो, त्यसपछि उनको अन्तिम लडाईको शुरुवातमा प्रकाशको प्रहारबाट उसको मृत्यु भयो। प्रिमो कार्नेरा। फाइट लोरले लामो समयदेखि बायरको विनाशकारी दाहिने हातलाई स्काफको औंठी मृत्युको लागि जिम्मेवार ठहराएको थियो, तर १ 1930 s० को कट्टरपन्थी संस्कृतिमा, नेवार्कका खेल लेखकहरूले ग्यालेन्टो र माथिको लडाई-शाही दाबी गर्न तुरुन्तै बोलेको क्षति भएको थियो।
ग्यालेन्टो १ 1943 XNUMX मा बक्सि fromबाट अवकाश लिए, र आफ्नो प्रतिभालाई व्यावसायिक कुश्तीको दुनियामा लागू गरे। उनी अभिनयमा पनि फर्के, र उनलाई भूमिका पनि दिइयो सदाबहार वार पार (1958), जीवनका सर्वश्रेष्ठ चीजहरू नि: शुल्क छन् (1956), मान्छे र गुडिया (1955) र वाटरफ्रन्टमा (१ 1954 1960) उनले एक प्रकारको "लोक नायक" स्थिति कायम राखेका थिए र धेरै पटक प्रोफाइल गरिएको थियो, एक पटक डब्ल्यू सी हेन्जले सत्य पत्रिकामा (अगस्त, १ 41 279०; भोली। ,१, नम्बर २ XNUMX))।